भिडियो हाल्ने युट्युबर, गाली खाने पत्रकार !
१० साउन २०७५ मा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको थियो । यही बेला कतिपय युट्युब च्यानलले ‘सिरियल एपिसोड’ सुरु गरे । उनीहरूका लागि यो घटना ‘हट केक’ नै बन्यो । पछि प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्यो । अनि युट्युबरलाई के चाहियो ! आफैँ ‘हत्यारा’ घोषणा गर्न थाले । सनसनीपूर्ण हेडलाइन राखेर अनुसन्धानका दायरामा रहेकाहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन लागे ।
एक प्रहरी अधिकारी सम्झन्छन्, ‘एकातिर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको नियतमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको थियो, अर्कातिर युट्युबका अतिरञ्जित सामग्रीले हामी अलमलिएनौँ मात्रै, अनुसन्धान नै प्रभावित बन्ने स्थिति बन्यो ।’ युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो सामग्रीका कारण पनि धेरै मानिस उद्वेलित बने । भीडले दबाब बढाउन थालेपछि प्रहरी अधिकारीहरूसमेत ‘मनगढन्ते’ भिडियो सामग्रीले किटान गरेका अनुहारतिर अलमलिन पुगेका थिए । निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ ।
भदौ २०७६ मा ‘कथित् आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा’मा टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेसहित उनका दुई सहकर्मी पक्राउ परे । पूर्वसहकर्मी शालीकराम पुडासैनीले चितवन पुगेर आत्महत्या गरेकाले पक्राउपछि रबिलाई चितवन नै लगियो । आत्महत्या गरेका शालिकरामको परिवार शोकमा थियो भने आरोपितका परिवार चिन्तामा । त्यही बेला चितवनमा ‘युट्युबरको मेला’ लाग्यो । कतिपयले यो घट्नालाई ‘महोत्सव’ नै ठानेको देखियो । अधिकांश युट्युबरको उद्देश्य भ्युअर्सलाई सही र विश्वसनीय सूचना दिनेभन्दा पनि कसरी आफ्ना सामग्री बढीभन्दा बढी शेयर गराउने भन्नेमै केन्द्रित थियो । उनीहरूका हेडलाइन र कन्टेन्ट हेर्दा सजिलै यो कुरा खुट्याउन सकिन्थ्यो । त्यसैले उनीहरूले अदालतमा विचारधीन मुद्दामा ‘सिरियल एपिसोड’नै चलाइदिए ।
त्यसबेला सबैका ट्यागमा लामिछाने वा शालिकराम पुडासैनी थिए । हेडलाइन पनि यस्ता थिए, ‘रबि लामिछाने जेलभित्र यस्तो अवस्थामा’ ‘हिरासतबाट रबिले मुख खोले’ ‘प्रहरीले फेला पार्‍यो यस्तो सनसनीपूर्ण प्रमाण, अब के हुन्छ ?’ ‘पुडासैनी प्रकरण यसरी भएको हो, रविलाई यसकारण फसाइयो’ ‘हुने भो शालिकरामको भिडियोभित्रको रहस्य, हुने भो सबै खुलासा’, ‘मध्य रातमा चितवनबाट एक्सक्लुसिभ रिपाेर्ट, पत्ता लाग्यो घिनलाग्दो चलखेल’, रबिलाई जेलमा सडाउने षडयन्त्र यसरी तुहिँदै, रवि पाँच दिनभित्र रिहा हुने, प्रधानमन्त्री निवासमा खैलाबैला ।’
युट्युबरले बर्दी त लगाएका थिएनन्, तर प्रहरी बने । कालो कोट थिएन, तर वकिल बने अनि इजलास थिएन, न्यायाधीश बने । भलै रविले पछि सफाइ पाए, तर कतिपय युट्युबरले पहिल्यै उनलाई ‘निर्दोष सावित’ गरिसकेका थिए भने कतिपयले जेल हाल्ने निचोड सुनाइसकेका थिए । ‘प्रचण्डले रिस फेर्न रविलाई फसाएको खुलासा, चितवनको एसपी प्रचण्डको भूपूबडिगार्ड, सबै योजनाको पर्दाफास’, ‘अब रवि फसे, निस्कन मुस्किल’जस्ता हेडलाइन राखेर भिडियो ‘बिकाउने’ होड चल्यो युट्युबमा । यस्ता खबर र भिडियो सामग्रीले ठूलो समूहमा आशंका, घृणा र वितृष्णा फैलाइदियो । रवि पक्राउको विरोधमा प्रहरी अधिकारीलाई गाली गर्दै स्टाटस पोस्ट गर्ने केही युवा पक्राउ परे । रवि पक्राउ गर्दाका चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लबारे सामाजिक सञ्जालमा आजपर्यन्त नकारात्मक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
भदौ २०७६ मा कपनमा ३१ वर्षीया प्रकृति राई आफ्नै डेरामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । उदयपुर बेलका नगरपालिका–८ स्थायी घर भएकी प्रकृति आफ्ना श्रीमान्‌सँग कपनस्थित डेरामा बस्थिन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला केही युट्युबरले प्रकृतिलाई उनकै श्रीमान्‌ले हत्या गरेको दाबी गर्दै भिडियो सामग्री बनाउन थाले । मजदुरी गरी छाक टार्दै आएका प्रकृतिका श्रीमान्‌ले प्रहरीलाई पैसा खुवाएर घटना सामसुम पार्न खोजेको भन्दै युट्युबरले उनलाई ‘हत्यारा’ करार गरिदिए । भीड युट्युबकै पछि लाग्यो । प्रहरीको विरोध सुरु भयो । अन्ततः प्रहरीले पर्याप्त प्रमाणबिनै प्रकृतिका श्रीमान्‌लाई पक्रियो र मुद्दा चलायो । झण्डै एक महिनापछि अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । श्रीमतीको आत्महत्याले पीडित बनेका उनी थप पीडा भोग्न बाध्य बने । त्यसपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘पत्रुकारहरूले निर्दोषलाई दुःख दिए ।’
माघ २०७६ मा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना गम्भीर घाइते र घरमा काम गर्ने दाङका विजय चौधरी मृत अवस्थामा भेटिए । मुनालाई गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको थियो भने विजय झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । पछि अस्पतालमा मुनाको पनि मृत्यु भयो ।
घटनापछि मृतकका परिवार शोकमा थिए । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, केही युट्युबरले मुना र विजयको मृत्युबारे सनसनीपूर्ण शीर्षकसहितको भिडियो छ्यापछ्याप्ती पारिदिए, ‘पूर्वसचिव प’त्नी ह’त्या प्रकरण : सी’सी’टी’भी फु’टेज बाहि’रियो, मुना कार्कीको ह’त्या’रा चिन्नुहोस्’, ‘कामदारले गर्‍यो मुना कार्कीको हत्या, सीसीटीभीमा यस्तो देखियो’, ‘काठमाडौंमा दिउँसै पूर्वसचिव पत्नी र कामदारको हत्या, कसरी भयो यस्तो छिमेकी यसो भन्छन्’, ‘पूर्वसचिवकी श्रीमतीलाई यसरी हत्या गरेको रहेछ, देखियो यस्तो फुटेज’, ‘ललितपुरमा मुना कार्कीको आफ्नै कामदारबाट हत्या, यसो भन्छन् छिमेकी’, ‘पूर्वसचिवकी पत्नी मुनाको कामदारले लियो ज्यान, कारण यस्तो’, ‘भेटियो सीसीटीभी फुटेज, कामदारले नै गरे पूर्वसचिव पत्नी मुना कार्कीको बीभत्स हत्या, कारण यस्तो’ ।
अब ती हेडलाइनमा राखिएका तस्वीर त झन् हेरिसक्नु थिएनन् । यस्ता शीर्षक राखेर युट्युबरले दर्शक र डलर त बटुले तर मिडियाको मर्म र कुनै मुद्दाको संवेदनशीलतालाई पनि उसैगरी लत्याए ।
दुई वर्षअघि ‘भारतीयलाई नागरिकता दिइँदै’ शीर्षकको एउटा भिडियो युट्युबमा आयो । पछि त्यो फेसबुकमा पनि छ्याछ्याप्ती भयो । ‘भारतीयलाई नेपाली नागरिकता काण्ड’ ह्यासट्यागमा त्यो भिडियोले सनसनी मच्चायो । नागरिकताको बहस उत्कर्षमा रहेकै बेला पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि नेपाली नागरिकता लिन भारतीयको घुइँचो भन्दै भिडियो आएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘बिजनेस’ पाए । त्यही एउटा भिडियोले युट्युबमा अनेक हेडलाइन जन्मायो । यही मौकामा केही विश्लेषक ‘भाइरल’ बने अनि कतिपय मानिसलाई युट्युबरले नै राष्ट्रवादी घोषणा गरिदिए । यति मात्र होइन, त्यो भिडियो हेरेकै भरमा सडकमा नाराबाजीसमेत भएको थियो । तर पछि त्यो भिडियोको सूचना गलत प्रमाणित भयो ।
गत वर्ष युट्युबरले अर्जुन विक नामका एक मजदुरको परिवार नै भाँडिदिए । सामान्य भनाभनका कारण अर्जुनकी श्रीमती माइत गएकी थिइन् । भोलिपल्ट छोरीलाई पिठ्युँमा राखेर रिक्सा चलाइरहेका अर्जुनको भिडियो खिचेर युट्युबरले ‘भाइरल’ बनाइदिए । यति मात्र होइन, भावाशेषमा ल्याएर अर्जुनलाई श्रीमतीविरुद्ध बोल्नसमेत लगाए । त्यसपछि युट्युबरका लागि ‘मसला’ बने अर्जुन, जति मन लाग्यो, जसरी मन लाग्यो, त्यसरी ‘तरकारी’मा हाल्ने र स्वाद लिने ।
उनका बारेमा युट्युबमा गीत नै बन्यो । अर्जुनका घरबेटी, तिनका छिमेकी, चिनजानका व्यक्ति कोही बाँकी रहेनन् भाइरल बन्न । पछि उनकी श्रीमतीलाई पनि युट्युबरले भाइरल बनाए । यस्तै, बाझाबाझका क्रममा अन्ततः उनीहरू छुट्टिए ।
‘बच्चा पिठ्युँमा बोकेर काम गर्ने दयालु बुबा’देखि सुरु भएको अर्जुनसम्बन्धी भिडियो हेडलाइन ‘हात जोड्दै अर्जुनका साथी मिडियामा । हे भगवान् ! यस्तोसम्म गरेका रहेछन् अर्जुनले’, पिठ्यूँमा बच्चा बोकेर काम गर्ने अर्जुन विककी श्रीमतीलाई खोजेर ल्याए पत्रकारले, किन यस्तो गरेको ?’, भाइरल अर्जुनकी घरबेटी आइन् मिडियामा, खोलिन् अर्जुन र उनकी श्रीमतीको वास्तविकता’, पुण्य गौतमबाट आयो यस्तो जवाफ, अब अर्जुनलाई के होला ?’, पिठ्युँमा बच्चा बोकेर काम गर्ने अर्जुन विककी श्रीमती रुँदै मिडियामा, वास्तविकता के, किन यसो गरेको ?’ सम्म बने ।
नेपाली युट्युबरले नै एक जना अघोरी भनिएका बाबालाई उकासेर विवाह गराइदिएको धेरै भएको छैन । ठट्यौली पारामा कतिपयले भन्ने गरेका छन्, ‘युट्युबरले अघोरी बाबाको धर्म नै भ्रष्ट गराइदिए ।’ रबिना वादी नामकी एक महिलाको दुःखमा पनि युट्युबरको सानोतिनो मेला लागेन ।
अहिले पनि प्रदेश- १ की १६ वर्षीया किशोरी अनिसा र कञ्चनको ‘ट्रयाजेडी’लाई कतिपय युट्युबरले बिजनेस बनाएका छन् ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, व्यक्तिका बेडरुमदेखि पाइखानासम्म युट्युबरले कतै, केही बाँकी राखेका छैनन् भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । निकै सब्स्क्राइबर रहेका च्यानलबाट प्रसारित सामग्री हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता च्यानलका कन्टेन्ट, क्यारेक्टर र एनालाइसिस साह्रै गैरजिम्मेवार, अपरिपक्व र भड्किला हुन्छन् ।
युरोप, अमेरिकामा सरकार बनाउन प्रयोग हुन्छ युट्युब
अमेरिकामा सन् २००६ मा रिपब्लिकन जर्ज एलेनले डेमोक्रयाट जिम वेबसँग सिनेट चुनाव हारे । एलेनलाई हराउन वेबका तर्फबाट युट्युबको भरपूर प्रयोग गरियो । कथित् नस्लवादी टिप्पणी गरेको उनको भिडियो क्लिप युट्युबमा अपलोड गरी विपक्षीले चुनावमा प्रचार गरे । उनले चुनाव हार्नुको मुख्य कारण नै यही बन्यो । त्यो बेला जेम्स कोटकीजस्ता राजनीतिक व्याख्याता पनि युट्युब राजनीतिमा हामफाले ।
चाड हर्ले, स्टिभ चेन र जावेद करिमले सन् २००५ मा भिडियो हेर्ने गरी बनाइदिएको वेबसाइट युट्युब डटकमले आज संसारको राजनीतिमा अदलाबदली ल्याउने तागत राख्छ । रिपब्लिकन एलेनले चुनाव हारेको वर्ष अर्थात् सन् २००६ मा त युट्युब आएको एक वर्ष मात्र भएको थियो ।
त्यसयता १४ वर्षको अन्तरालमा युट्युब विश्वशक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावदेखि नेपालको कुनै विकट गाउँको मजदुर, किसानसम्मलाई दख्खल दिन समर्थ छ । सामाजिक रुपान्तरणमा युट्युबको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी बनेको छ ।
छिमेकी भारतमा देशभक्त, न्युज लाउन्ड्री, क्विन्ट, वायर, ललन्टपजस्ता युट्युब च्यानल विश्वसनीय र लोकप्रिय छन् । यी च्यानलमा रचनात्मक, आलोचनात्मक, तथ्यगत विचार, विश्लेषण, संवाद अपलोड गरिन्छ । नेपालसहित विश्वका धेरै देशका मानिसले यी च्यानल सब्स्क्राइब गरेका छन् । नेपालमा पनि केही विश्वसनीय च्यानल छन् तर अत्यन्तै न्यून संख्यामा ।
सस्तिँदै गएको स्मार्टफोन र डाटाले इन्टरनेटमा आममानिसको पहुँच बढ्दो छ । अब गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ । एउटा सामान्य मानिसलाई युट्युबमा जे देखाइन्छ, उसले सोहीअनुसारको धारणा बनाइरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा विश्वसनीय च्यानलभन्दा बढी अरुका दुःख बेच्ने, झैझडा देखाउने, विषय र प्रसंगलाई अतिरञ्जित गर्ने, परिआए प्रहरी, अख्तियार, अदालत सबै बनेर आतंक सिर्जना गर्ने खालका युट्युबतिर धेरै मानिस अलमलिइरहेको पाइन्छ । अत्यासलाग्दो कुरा त के भने, यस्तै च्यानल हेरेर हाम्रो समाजले धारणा बनाउन थालेको छ ।
भड्किला र अतिरञ्जित सामग्री नै धेरै पटक हेरिएका हुन्छन् । अर्को बिस्मात् के भने, व्यापक अध्ययन गरेर बनाइएका भिडियो, प्राज्ञिक बहस, अन्तर्वार्ता, सूचना र ज्ञानवर्धक सामग्रीभन्दा अरुलाई गाली गरेको, बाझाबाझ गरेको, तुच्छ बोलेको भिडियो बढी हेरिएको हुन्छ ।
मानवीय स्वभाव हो, असामान्यजस्तो देखिने कुराले ध्यान तान्ने, अरुका दुःख हेर्न मन लाग्ने । टाइटानिक चलचित्रमा धेरैले रुचाएका दुईवटा सिन छन् । एउटा रोज र ज्याकको रोमान्स र अर्को डुब्दै गरेको टाइटानिक जहाज ।
आज नेपाली युट्युबरहरू मानिसका बेडरुमदेखि पाइखानासम्म छिरिसकेका छन् । युट्युबरबाट निम्नवर्गीय मानिस सबैभन्दा पीडित बनेका छन् । अलि पहुँचवालासम्म भने युट्युबर पुग्न सकेको देखिँदैन । जस्तो कि, पूर्वसचिव कार्कीको घरमा पुग्न नसकेपछि धेरै युट्युबरले छिमेकी र बटुवाको अन्तर्वार्ता चलाए ।
पत्रकारिता पढाउँदै आएका कुन्दन अर्याल भन्छन्, ‘युट्युबमार्फत सबै नराम्रो मात्र भएको होइन, राम्रो काम पनि भइरहेको छ, तर कतिपय युट्युबरले आत्मबोध गर्न जरुरी छ कि उनीहरूले कसका लागि, किन भिडियो उत्पादन गरिरहेका छन् ।’
युट्युब हेर्ने दर्शक आफैँ पनि सजग हुनुपर्ने अर्याल बताउँछन् । ‘नकारात्मक, भड्काउ र भ्रामक सामग्री छन् भने युट्युबले रिपोर्ट गर्न सक्ने अप्सन दिएको हुन्छ । कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गरेको पाइए युट्युबले हटाइदिन्छ । त्यसैले हामी दर्शक पनि सचेत हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
नियमन नभएर युट्युबका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउनुपर्नेमा अर्यालको जोड छ । यद्यपि, यससम्बन्धमा बौद्धिक विवेचनाको खाँचो औँल्याउँछन् उनी । ‘पहिलो कुरा युट्युब चलाउनेहरू आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ’, अर्याल भन्छन् ।
युट्युब नेपालका लागि नयाँ विधा भएकाले राज्यले यससम्बन्धी गम्भीर विवेचना गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेमा अर्यालको जोड छ ।
भड्काव सामग्री किन ?
युट्युबरले कुनै पनि विषयलाई सनसनीपूर्ण बनाउनाको मुख्य कारण डलर हो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालको समसामयिक घटनाबारे स्वाभाविक रुपमा बढी चासो हुन्छ । यसबारे थाहा पाउन उनीहरु युट्युब र डिजिटल मिडियाको सहारा लिन्छन् । युट्युब च्यानलहरुको लक्षित समूह पनि विदेशमा बस्ने नेपाली नै हुन् । किनभने, नेपालमा खोलिएका युट्युब च्यानलले पाउने पैसा नेपालभन्दा बाहिरका देशबाट आउने ‘भ्युज’ का आधारमा बढी हुन्छ ।
यसरी भ्यूजका आधारमा मात्र भन्दा पनि देशबाहिरबाट कतिले भिडियो हेरे भन्ने आधारमा युट्युबरलाई पैसा आउँछ । मोनिटाइज भएपछिको सम्झौताका आधारमा ‘वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर’बाट उनीहरूले पैसा बुझ्ने गरेका छन् ।
अहिले युट्युबरले उत्पादन गरेका कतिपय विवादास्पद सामग्रीमा कमेन्ट गर्दा ‘पत्रुकार’, ‘अलपत्रकार’, ‘पत्रकारको बुद्धि हेर’, जस्ता कमेन्ट ज्यादै पढ्न पाइन्छ । तर, वास्तवमा युट्युबरले उत्पादन गरेका ती सामग्रीमा पत्रकारिताको सामान्य नियम पनि पालना गरिएको हुँदैन । एउटा व्यक्तिको बेडरुममा छिरेर जबर्जस्ती भिडियो बनाउनेहरू आफूलाई सगर्व पत्रकार भन्दै हिँडेको पाइन्छ । आममानिसले उसलाई पत्रकार मानेकै छन् ।
अहिले पनि ट्रेन्डिमा रहेको ‘जापानवाला’ भिडियोमा आफूलाई पत्रकार बताउने गंगा लामाले पीडितको आवाज बोलेकी छन्, त्यो प्रशंसायोग्य देखिन्छ । तर, उनैले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालसँग गरेको अन्तर्वार्ता भने हास्यास्पद छ । ठगी आरोप लागेकी कमला भण्डारीलाई अदालतले ‘हाजिरी जमानी’मा छोडेकाले आफूहरूले केही गर्न नसकेको जवाफ दहालले दिएपछि गंगाले जंगिदै बारम्बार एउटै प्रश्न गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ, ‘तपाईंहरूले किन छोड्नभो ? ठगलाई त्यसरी छोड्न मिल्छ ?’ अदालतले छोड्नू भनेका व्यक्तिलाई अब विभागले कसरी समाएर राखोस् !
खासगरी सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघले यसबारे गम्भीर विवेचना गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । अनलाइन पोर्टललाई सञ्चारमाध्यमको मान्यता दिइएको छ, प्रेस काउन्सिलले नियमन गरिरहेको छ ।
युट्युबरका कमजोरी औँल्याउँदै गर्दा सबै पत्रकार आचारसंहितामै छन् भन्न खोजिएको होइन । मूलधारमा पत्रकारिता गरिरहेकै कतिपय व्यक्तिका गतिविधि र समाचारमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ‘लिबरल बायस’ को प्रवृत्ति नेपाली पत्रकारितामा देखिएकै कुरा हो । तत्कालीन नेकपा हुँदै अहिले एमाले विवादसम्म पत्रकारहरूका विभाजित कन्टेन्ट आइरहेकै छन् । तर, योभन्दा धेरै घातक छन्, अहिले युट्युबका कतिपय सामग्री । त्यसैले युट्युबर उत्तरदायी हुनैपर्छ ।
युरोप र अमेरिकामा सरकार बनाउन प्रयोग भइरहेको युट्युब नेपालमा कसैको घर बिगार्न, समाजमा कुनै सन्देश नै नदिने खालको सामग्री अपलोड गर्नमा प्रयोग हुन नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०७७, ०७:५२:००